सरकारी कर्मचारीले घु’स माग्दा किसानले दिए भैंसी उपहार ! – Khabarhouse
सरकारी कर्मचारीले घु’स माग्दा किसानले दिए भैंसी उपहार !
Khabar house | २७ फाल्गुन २०७६, मंगलवार ०४:१८ | Comments
काठमाडौं : सरकारी कर्मचारीले नियमित जसो घु’स मागेर तनावमा परेका एक किसानले अनौठो तरिका अपनाएका छन् । किसानले आफ्नो भैंसी नै सरकारी कर्मचारीलाई दिएका छन् । यो घटना भारतीय राज्य मध्यप्रदेश, खडकपुरको हो । खडकपुरका भूमि कर अधिकारी (तहसील दार) ले किसानसँग घु’स मागेका थिए । तहसील दारलाई घु’स दिनका लागि किसानसँग नगद रुपैयाँ थिएन ।
त्यसपछि किसानले तहसील दारको गाडीमा आफ्नो भैसीको दाम्लो बाँधिदिए । ‘घु’स दिनलाई मसँग पैसा छैन, यो भैंसी लैजानुहोस्’ भन्दै किसानले तहसीलदारको गाडीमा आफ्नो भैंसी बाँधिदिए । तहसीलदारले किसानसँग १ लाख रुपैयाँ घु’स मागेका थिए । भार तीय सञ्चार माध्यमका अनुसार खडकपुरका तहसीलदार सुनील बर्माले जमिनको दर्ता प्रयोजनका लागि १ लाख घु’स मागेका थिए ।
सरकारी कर्मचारीले घु’स मागेपछि किसानले गाडीमा भैंसी बाँ’धि दिएको खबर अहिले उत्तर प्रदेशमा चर्चाको विषय बनेको छ । किसानले अहिले माथिल्लो सरकारी निकायमा तहसीलदार बर्मा वि’रुद्ध उ’जुरी गरेका छन्। सरकारी अधिकारीहरले तहसीलदार बर्मा माथि अ’नुसन्धान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
जुन समूहले मलाई अध्यक्ष दिन्छ, त्यही समूहमा जान्छु : वामदेव गौतम
निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीले केही समयका लागि भए पनि रोजगारी पाउछन् : अर्थमन्त्री पौडेल